बैंक/बीमा « Arthabazar.com
काठमाडौ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको ५६ औं वार्षिकोत्सबको अवसरमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा सोमबार रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । रक्तदान कार्यक्रममा १७१ जनाले रक्तदान गर्नुभएको छ । बैंकका
काठमाडाै । समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले करदाता सेवा कार्यालय खैरहनी नगरपालिका, चितवनमा नयॉ एक्सटेन्सन काउन्टर संचालनमा ल्याएको छ । अब खैरहनी नगरपालिकाको करदाता
काठमाडौं। ज्योति विकास बैंकका अध्यक्ष र एक सन्चालकको नाममा दर्ता भएको एक इन्जिनिएरिङ कन्सल्टेन्सीले सोही बैंकको धितो मुल्यांकनको काम गर्ने रहेछ । नियमविपरित सन्चालकहरुकै स्वामित्वमा रहेको सो कम्पनीले खोला बगिरहेको
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूको बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएको छ । बैंकको आज(माघ ५ गते) सोमबार मात्रै १३ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । गत
काठमाडौं । आइएमई ग्रुप अन्तर्गत संचालित आइएमई मोटर्स प्रा. लि. द्धारा प्रवद्धित अशोक लेलैण्डले ‘मेघा विन्टर सर्भिस क्याम्प’ देशैभरी आफ्ना १३ सर्भिस सेन्टरहरुमा लागु हुनेगरी आज बाट सुरु गरेको छ
काठमाडाै । बागमती प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र विशाल फाउण्डेशनले स्टार्टअप आइडिया कल कार्यक्रम अन्तगर्त युवा उद्यमी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु भएको छ । शनिबार एक कार्यक्रमका बिच अर्थ मन्त्रालयका
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सले माघ ११ देखि एकीकृत कारोबार थाल्ने
काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड र सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स लिमिटेडले माघ ११ गते आइतबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन
काठमाडाैं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले कीर्तिपुरमा नयाँ शाखा विस्तार गरेकाे छ । नयाँ शाखा आइतबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएकाे बैंकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएकाे छ । कीर्तिपुर नगरपालिका–९, नयाँबजारमा बैंकको नयाँ
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओमा मागभन्दा बढी आवेदन
काठमाडाै । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले खुल्ला गरेकाे साधारण शेयर (आइपिओ) मा मागभन्दा बढी आवेदन परेकाे छ । आइतबार दिउँसो ४:३० बजेसम्ममा ८ लाख २ हजार ७०८ जना आवेदकले ९
काठमाडाै । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाईको अध्यक्षतामा महासंघको रोजगारदाता परिषद गठन भएको छ । परिषद्को उपसभापतिमा महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्य प्रवलजंग पाण्डे चुनिनु भएको छ ।